ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှို, ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှို, စိတ်တိုင်းကျပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများ - QiDi
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှို
ဆံပင် Drier အစိတ်အပိုင်းများ
custom CNC စက်ပစ္စည်း
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
YuYao QiDi ပလတ်စတစ်မှိုစက်ရုံထိပ်အရည်အသွေးကိုစိတ်တိုင်းကျ CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုအထူးပြုတဲ့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်၏ ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာ; တရုတ်ပြည်တွင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်အသင်းတော်များနေမှုကိုချေဖျက် metal, ကျနော်တို့ professinal ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်နည်းပညာပုဂ္ဂိုလ်များရှိသည်။ ငါတို့ထုတ်လုပ်မှု, လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ, ဂဟေဆော်ခြင်း, ပရိသန်ဆောင်မှုကိုပေး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုဖန်ဆင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအတွက်ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်နေကြသည်။ သင်တစ်ဦးပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကသင်၏အယူအဆနဲ့ဒီဇိုင်းကိုယူရှေ့ပြေးပုံစံ, ဖွံ့ဖြိုး, tool ကိုနှင့်သင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အားလုံး blog post ရှုမွ
ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ 's အသက်ပေတည်းနားလည်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးမောင်းနှင်: စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူမှုနှင့်တာဝန်ခံမှုအဖွဲ့အစည်းအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုတရားဝင်ကုန်ပစ္စည်းသဘောပေါက်တိုင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ Analyze နဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်စေမထုတ်ကုန်ငါတို့သည်သင်တို့၏အရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထုတ်လုပ်ကြောင်းအာမခံဖို့က ISO 9001 အရည်အသွေးစနစ်များအောက်မှာကွပ်မျက်ခံရနေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ, အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်က ISO 9001 လက်မှတ်ရထုတ်လုပ်သူသို့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောထုတ်ကုန်စိုက်ပျိုးထားပါတယ်, ကျနော်တို့မှာလည်းလုပ်-ခုနှစ်တွင်တရုတ်ထံမှ SGS လက်မှတ်ကိုရှိသည်။
စိတ်တိုင်းကျပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာ၏ Professional ကထုတ်လုပ်သူ; CNC အစိတ်အပိုင်းများ machining နှင့်သတ္တု 10 နှစ်နှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ကုန်နေမှုကိုချေဖျက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ Ningbo မြို့, တရုတ်တွင်တည်ရှိသည်။
နေရပ်လိပ်စာ: No.12 HuangJiaXiang လမ်း, LanJiang လမ်း, YuYao စီးတီး
E-mail ကို: export.qidi@gmail.com
ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုဆိုတာဘာလဲ
အဆိုပါ CNC စက်ပစ္စည်းသောကြေးဝါအစိတ်အပိုင်းများဘာတွေလဲ
* CAPTCHA: အဆိုပါ select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. သစ်ပင်